Tsunami | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အင်ဒိုနီးရှားငလျှင် ၄၄ ဦးသေဆုံး၊ ၄ဝဝ ကျော် ဒဏ်ရာရ
အင်ဒိုနီးရှားမှာ မနေ့က လှုပ်သွားခဲ့တဲ့ မြေငလျှင်ကြောင့် လူပေါင်း ၄၄ ဦးသေဆုံးပြီး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း CNN ရဲ့ အင်တာနက် သတင်းမှာ တင်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အပျက်အစီးများနဲ့ မြေပြိုမှုတွေရဲ့ အောက်မှာ ပိမိပြီးပျောက်ဆုံးနေဆဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တွေက ကြိုးစားကယ်တင်နေကြကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။
Cianjur မြို့ကလေးမှာ အိမ် ၁၁ လုံးမြေပြိုတဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီး လူ ၃၂ ယောက် အရှင်လတ်လတ်မြေမြှုပ်ခံလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း CNN သတင်းထောက် Andy Saputra ကို ဒေသခံ တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။
အင်အားပြင်းထန်တဲ့ ငလျှင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၄၄ ဦးသေဆုံးကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၄ဝဝ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲကြောင်း အဲဒီသတင်းမှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ငလျှင်ဗဟိုချက်နဲ့ မိုင် ၇ဝ လောက်ဝေးကွာတဲ့ Tasikmalaya တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာ အခုအချိန်အထိ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
Original CNN News Link
Watch description of the evacuation after the quake hit » မြေငလျှင်လှုပ်ခတ်စဉ် စီအင်န်အင်န်၏ ဗီဒီယိုကြည့်ရန်
Watch how buildings swayed during quake » မြေငလျှင်ကြောင့် အဆောက်အဦများ လှုပ်ရမ်းသွားခဲ့ခြင်းအားရိုက်ကူးထားသည့်ဗီဒီယိုကြည့်ရန်
Posted in Quakes. Tags: earthquake, Tsunami.2Comments »